Friday May 19, 2017 - 15:16:21 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Waxaa maanta oo Jimce dalka IRAN ka dhaceysa doorashada Madaxweynaha oo ay ku loolamayaan Madaxweynaha hada xilka haya Hassan Rouhani iyo Wadaadka Mayilka adag ee Ibrahim Raisi.
Murashaxa la tartamaya Madaxweynaha ee Mr.Raisi ayaa isagu si weyn uga soo horjeeda in wax wadahadal ah lala yeesho dalalka reer Galbeedka, isagoona si weyn u cambaareeyey heshiiskii Barnaamijka Nukliyerka IRAN ee xukuumada Rouhani la gashay dalalka reer Galbeedka si loo qaado cunaqabateynta saarneyd dalka IRAN.
Raisi ayaa ku doodaya in dalalka reer Galbeedka ay kasoo bixi waayeen balantoodii, isla markaana xukuumada talada heysa ee Madaxweyne Rouhani aysan waxna u qaban dadka saboolka ah.
Rouhani ayaa ugu baaqay shacabka IRAN inaysan dooran murashaxa Xagjirka ah.
Hogaamiyaha Ruuxiga ah ee IRAN Khumeyni oo xaaladiisa caafimaad beryahan liidatay ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay inay codkooda dhiibtaan, xili la hadal hayo inuu si hoose u taageerayo Murashax Raisi oo ay garab taagan yihiin hogaamiyayaasha mayilka adag ee Militariga iyo Shuurada dalkaasi.
Golaha Sare ee kala saara murashaxiinta doorashada ka qeyb galeysa ayaa horey tartanka uga reebay Madaxweynihii hore Ahmedinajad oo isagu laftiisa sanadkan doonayey inuu tartanka galo, arrintaasi oo la rumeysan yahay inuu ka danbeeyey hogaamiyaha ruuxiga ah ee Khumeyni.
Danjire Jamaal Barrow oo Warqadihiisa Aqoonsiga Safiirnimo u Gudbiyay Madaxweynaha Zimbabwe -Sawirro
14/05/2018 - 08:48:15
Ku simaha Madaxweynaha oo Si Rasmi ah u Daah Furay Shirweynaha Qaran ee Dastuurka -Sawirro
13/05/2018 - 19:09:32
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Waare oo Si Weyn Loogu Soo Dhoweeyay Baydhabo -Sawirro
13/05/2018 - 19:01:36
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo Gaaray Baydhabo -Sawirro
13/05/2018 - 18:55:12